Smartphones na-erughị 100 euro | Akụkọ akụrụngwa
7 smartphones ị nwere ike ịzụta maka ihe na-erughị 100 euro
Mgbe ịmechara nyocha nke ihe 7 kacha mma Chinese smartphones nke hụworo ìhè n'ahịa n'oge 2015 a, taa anyi choro inye gi a ndepụta nke ngwaọrụ mkpanaaka anyị nwere ike ịzụta maka ihe na-erughị 100 euro. Anyị maara na ọ bụ obere ego, mana ọbụlagodi na ihe niile maka ọnụahịa ahụ, anyị nwere ike ịchọta ụfọdụ karịa ọnụahịa ndị na-adọrọ mmasị.
N'ezie, tupu anyị amalite ndepụta a, anyị ga-agwa gị na ọ bụrụ na ị na-achọ ama nwere nnukwu atụmatụ ma ọ bụ nke na-ejikwa foto dị mma, ị na-achọ ebe na-ekwesịghị ekwesị. Ntọala ndị a anyị ga-ahụ ebe a nwere ike izu oke maka onye naanị chọrọ ịkpọ na izipu ozi site n'oge ruo n'oge site na ngwa izipu ozi ozugbo. Mgbe ị na-agụ isiokwu a, buru n'uche mgbe niile na echiche a bụ itinye ihe na-erughị 100 euro na ọnụ, ka ị nwee ike ịnye anyị ọ gaghị adị mma, mana karịa "dị mma n'anya".
Ọ bụrụ n'inwere obere ego, ịchọrọ inwe mkpanaka nke abụọ ịkpọ na obere ihe ọzọ ma ọ bụ na ị naghị arịọ ihe ọ bụla site na ama, otu n'ime ụdị ndị a nwere ike ịdị mma maka gị. Lezienụ anya n'ihi na anyị ga-enye gị nnukwu ozi, mana onye ga-ekpebi nke ị ga-azụta bụ gị.
1 Ike Ekwentị Agba
4 Motorola Moto E (ọgbọ 1)
7 Kubot s168
Ike Ekwentị Agba
Naanị 59 euro bụ ọnụahịa nke a Ike Ekwentị Agba, nke ga-enye anyị ihuenyo 4-inch na atụmatụ na nkọwapụta na-enweghị nnukwu nkwado, mana nke ga-ezuru onye ọrụ ọ bụla na-achọghị nnukwu Smartphone ya.
Mụ onwe m nwere ngwaọrụ mkpanaka a maka akara m nke abụọ ma ọ dị mma iburu akpa nke uwe ogologo ọkpa na-enweghị iwere ohere dị ukwuu. Ọ na-arụ ọrụ zuru oke, ọ nwere sistemụ arụmọrụ nke Android 4.4. KitKat na maka ọnụahịa ya nwere ọ gaghị ekwe omume ịrịọ maka ihe ọ bụla.
Ọzọ anyị ga-enyocha ha isi atụmatụ na nkọwa;
Processor: Ugbo aka abuo ARM Cortex A7 1GHz
Ngosipụta: 4.0 nke anụ ọhịa TFT-LCD (WVGA - 800 × 480 pikselụ)
Batrị: 1450 mAh
Nchekwa: 4GB gbasaa site na microSD-HC / XC kaadị ruo 64GB
Igwefoto: 5MP azụ na akpaaka-elekwasị anya na ikanam flash
O nwekwara ihe na-adọrọ mmasị ohere nke igbanwe mkpuchi azụ maka ọzọ nke agba dị iche na anyị ga-ahụ na igbe nke usoro a Energy.
Nwere ike ịzụta ihe a Ike Ekwentị Agba HERE
Huawei bụ otu n'ime ndị na-ewu ewu China a ma ama na n'oge na-adịbeghị anya ịmara otu esi eme ihe nke ọma. Na nnukwu ogo ọnụ maka akara niile dị na ahịa, ọ jisiri ike merie ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ sitere n'akụkụ ụwa niile
Este Huawei Y530 bụ ihe atụ doro anya na nke a bụ na maka obere ego anyị nwere ike ịnwe ngwaọrụ mkpanaka na-atọ ụtọ.
Nke mbụ, anyị ga-eme nyocha ọsọ ọsọ nke njirimara ya na nkọwapụta ya;
Processor: Snapdragon 200 na 1,2GHz
Ihuenyo: 4,5 inch IPS na mkpebi 480 x 854 pikselụ
Batrị: 1750 mAh
Nchekwa: 4GB n'ime ruo 32GB site microSD
Igwefoto: 5MP azụ na 0,3MP n'ihu
A gam akporo: 4.3 jelii
Ọzọkwa Anyị anaghị eche ihu ọnụ ya na nkọwapụta dị ukwuu, mana ha ga-ezuru onye ọrụ ọ bụla na-enweghị ọtụtụ ihe achọrọ ma ọ bụ na ị gaghị eji ngwaọrụ gị nke ukwuu.
Nwere ike ịzụta Huawei Y530 a HERE.
Ọ bụrụ na anyị na-achọ ọnụ site na akara ama ama ama ama ama ama anyị nwere ike ịnweta nke a Sony Xperia E1 maka ọnụahịa dị n'okpuru 100 euro. Dị ka ọ na-emekarị na ngwaọrụ nke ọnụahịa a bulie ihuenyo 4-inch nwere mkpebi nke 800 × 480 pikselụ.
Nzube ya abụghị nke njedebe nke ụlọ ọrụ ndị Japan, mana ọ nwere ọmarịcha ọmarịcha ma mezuo na-echebara ọnụahịa anyị nwere ike iburu ya n'ụlọ.
Ndị a bụ isi atụmatụ na nkọwa nke a;
Ihuenyo: 4 inch 800 x 480 pixel TFT ihuenyo
Nchekwa: 4GB n'ime ruo 32 kwa microSD
Igwefoto: 3MP na autofocus na HDR
Nwere ike ịzụta Sony Xperia E1 a HERE.
Motorola Moto E (ọgbọ 1)
Motorola Otu n'ime ngwaọrụ mkpanaka ya enweghị ike ịhapụ ndepụta a ma ọ bụ na mgbakwunye na ịdị mma ma mara mma na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke Lenovo nwere ugbu a, dịkwa ọnụ ala. Otu ihe atụ bụ Moto E anyị nwere ike ịzụta maka ihe na-erughị 100 euro na-enweghị nsogbu ọ bụla n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa ọ bụla, ma ọ bụ dijitalụ ma ọ bụ nke anụ ahụ.
N'adịghị ka ọdụ ndị ọzọ anyị nwere ike ịhụ na ndepụta a a Moto E "na-apụta isi ya" na nkọwa dị oke mkpa ịbụ onye njedebe nke ihe a na-akpọ ntinye.
N’okpuru ị nwere ike ilebanye anya na njirimara na nkọwa ya niile;
Ihuenyo: 4,3 sentimita asatọ na mkpebi 540 x 960 pikselụ
Batrị: 1980 mAh
Nchekwa: 4GB gbasaa ruo 32GB site na microSD
Igwefoto: azụ azụ 5MP
Android: KitKat 4.4.4 ma melite gam akporo 5.0 Lollipop
Nwere ike ịzụta Motorola Moto E (ọgbọ 1) HERE.
Kasị ọnụ na Spanishlọ ọrụ Spanish BQ nwere na ahịa nwere ike ịnya isi nke inwe a pụtara ala price. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ha na-enye anyị nkọwapụta adịghị mma. Ihe omuma atu doro anya nke a bu nke a Aquarius 4 na anyị nwere ike inweta obere ego, ọ bụ ezie na anyị ga-achọ nke ọma ịchọta ya ebe ọ bụ na ihe kachasị dịkarịsịrị anya n'oge a bụ ịchọta ụdị nke 4G dị adị na ahịa nwa oge yana na anyị nwere ike ịzụta maka ọnụahịa karịrị 100 euro, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọtụtụ.
Ọzọ anyị ga-enyocha isi atụmatụ na nkọwa nke Aquaris 4 a.
Processor: Cortex A9 Dual Core ruo 1 GHz
Ihuenyo: 4 sentimita asatọ IPS nwere mkpebi 480 x 800 px. 233 HDPI
Batrị: 1500 mAh
Nchekwa: 12GB (4GB n'ime na 8 maka microSD klas 10)
Igwefoto: azụ azụ 5MP na ihu VGA
A gam akporo: 4.1 jelii
N'ime ekwentị niile ị nwere ike ịhụ na ndepụta a, ma eleghị anya nke a Doogee DG580 bụrụ onye kachasị mma na onye nwere njirimara na nkọwapụta kachasị ike. Obi abụọ adịghị ya, maka ihe na-erughị 100 euro ọ ga-esi ike ịchọta ngwaọrụ mkpanaaka ka mma karịa nke a. O bu ihe nwute, ọdụdụ a nwere nkwarụ na anyị agaghị enwe ike ịzụta ya n'ụzọ doro anya ma anyị ga-eme ya site na ụlọ ahịa ndị China, nke na-eme ka ihe sie ike ntakịrị ma mgbe ụfọdụ na-ebuli ọnụahịa ikpeazụ.
na isi nkọwa nke Doogee DG580 a ndị a;
Processor: Mediatek MTK6582 na 1.3GHz
Ihuenyo: 5.5 inch qHD
Batrị: 2500 mAh
Nchekwa: 8GB gbasaa site na kaadi microSD
Igwefoto: 8 megapixel azụ na n'ihu
Nwere ike ịzụta Doogee DG580 a HERE.
O nwere ike ịbụ obere ngwaọrụ mkpanaaka ama ama na listi, mana nke a Kubot s168 ọ bụ otu n'ime ndị ahụ nwere ike ịrapụ isi gị n'ihi ekele ya. N'ihi ọbịbịa nke ọnụahịa ndị ọzọ na ahịa, ọnụahịa ya belatara nke ukwuu n'oge ndị a, nke mere ka ọ bụrụ nnukwu nhọrọ n'okpuru euro 100.
Ndị a bụ njirimara ya na nkọwapụta ya;
Ihe nhazi: MTK6572A
Ihuenyo: 5 sentimita asatọ na mkpebi nke 960 x 540
Batrị: 1900 mAh
Igwefoto: megapixels 8 na ọkụ ọkụ
Otu n'ime ihe ndị anyị na-enweghị ike ịkwụsị igosipụta bụ atụmatụ ya, nke na-aga nke ọma na ọ bụ ihe ncheta nke njedebe ndị ọzọ dị elu n'ahịa, ọ bụ ezie na ee, ihe eji eme ihe eji arụ ihe adịchaghị iche.
Nwere ike ịzụta Cubot S168 a HERE.
Nke a bụ ndepụta anyị nwere ngwaọrụ mkpanaaka asaa anyị nwere ike ịzụta maka ihe na-erughị euro 7, ụfọdụ ọbụlagodi ihe na-erughị 100 euro. Agbanyeghị, anyị enweghị ike ikwu ọfụma na-ekwughi na agbanyeghị na anyị "naanị" emeela ohere maka ọdụ 100, enwere ọtụtụ ekwentị ndị erere taa maka erughị euro 7. E nwere ọtụtụ ụdị ndị China na-enye anyị ngwaọrụ na ọnụ ala dị ala na ọbụlagodi obere ihu ọma ma na-ele anya nke ọma, anyị nwere ike ịchọta ekwentị mkpanaaka, obere agadi mana nnukwu mma na ọnụahịa mkparị.
Kedu ihe ị chere bụ ekwentị kachasị mma na ndepụta a nke ngwaọrụ mkpanaka nke anyị nwere ike ịzụta maka ihe na-erughị 100 euro?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » 7 smartphones ị nwere ike ịzụta maka ihe na-erughị 100 euro
Etu esi ebudata Windows 10 na akara akara gụnyere
5 Ngwa iji chịkwaa mmefu ma ọ bụ ego ị na-akpata